कुन्ती भन्छिन्- १४ वर्षको उमेरमा गाएको गीत सुनाउनै पाएको थिइनँ, लकडाउनमा रेकर्ड गरेँ ! – Massive Khabar
Homeमनोरञ्जनकुन्ती भन्छिन्- १४ वर्षको उमेरमा गाएको गीत सुनाउनै पाएको थिइनँ, लकडाउनमा रेकर्ड गरेँ !
कुन्ती भन्छिन्- १४ वर्षको उमेरमा गाएको गीत सुनाउनै पाएको थिइनँ, लकडाउनमा रेकर्ड गरेँ !
गायिका कुन्ती मोक्तान हार्मोनियम समाएर बसेकी छन्। किबोर्डमा उनकै श्रीमान् शिलाबहादुर मोक्तान छन् भने भायोलिन र गितारमा दुई छोरीहरू शितल र सुवानी। साथमा ज्वाइँहरू मञ्जिलविक्रम केसी र सुजन श्रेष्ठ पनि आ–आफ्नो भूमिकामा तम्तयार छन्।
साँझ ५ बजेको छ। मोक्तान परिवारको लाइभ म्युजिक कन्सर्टमा तपाईंहरूलाई स्वागत छ।
यो प्रज्ञा भवन, सभागृह वा त्यस्तै कुनै सार्वजनिक मञ्चमा हुन लागेको कन्सर्ट होइन। यो कन्सर्टको प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदैछ, फेसबुकमा।
लकडाउनबीच सबै किसिमका सार्वजनिक समारोह बन्द भएकाले मोक्तान परिवारले यही जेठ १० गते बौद्धस्थित आफ्नै घरबाट फेसबुक लाइभ कन्सर्ट गरेका थिए।
कार्यक्रममा कुन्तीले ‘खुट्टा तान्दै गर’, ‘गोठालो जाँदा लाएको माया’, ‘भन्छन् कोही जिन्दगी यो’ लगायतका आफ्ना सदाबहार सुपरहिट गीतहरू गाएकी थिइन्। छोरीहरू शितल र सुवानीले पनि सँगसँगै गाएर उनलाई साथ दिएका थिए।
कोरोना महामारीले पूरै संसार आक्रान्त बनाएका बेला मनोरञ्जनका लागि बाहिर निस्कने वातावरण कहिले बन्ने हो ठेगान छैन। यस्तो परिस्थितिमा धेरै कलाकारले फेसबुकलाई दर्शक-श्रोतासम्म पुग्ने माध्यम बनाए। उनीहरूले आफ्ना सांगीतिक प्रस्तुतिदेखि मनका भावनासमेत फेसबुकमै पेस गरे।
यही क्रममा कुन्ती मोक्तान र उनको परिवारले उक्त लाइभ कन्सर्ट गरेको थियो, जसको दोस्रो शृंखला लिएर उनीहरू फेरि आउने तयारीमा छन्।
‘कलाकार भनेकै दुःख–सुखको साथी हो,’ कुन्ती भन्छिन्, ‘नभए दुःख पर्दा मान्छेले किन गीत सुनेर मन बहलाउन खोज्छ! हामीले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि रोकिनु हुन्न, थामिनु हुन्न।’
यही विचारले लकडाउनमा पनि सांगीतिक प्रस्तुति लिएर दर्शक-श्रोतासम्म पुग्ने हुटहुटी बढाएको उनी बताउँछिन्।
लाइभ कार्यक्रमको तयारीबीच नयाँ गीत बनाउने क्रम पनि रोकिएको छैन। कुन्ती र शिलाले लकडाउन अवधिमा एक दर्जनजति नयाँ गीत बनाए। अधिकांश स्थान-विशेष र त्यहाँको रहनसहन झल्किने खालका छन्। चारवटा नयाँ गीतको त घरकै आँगनमा खिचेर म्युजिक भिडिओसमेत तयार पारे, जुन सार्वजनिक भइसकेका छन्।
‘पुराना सम्झना बोकेका गीतहरूको नयाँ रेकर्डिङ गरेको छु,’ कुन्ती भन्छिन्, ‘लोपोन्मुख पूर्वेली विरही लोकभाकामा पनि गीत बनेको छ। आज नभए भोलि यसको महत्व बुझिने छ।’
सन् १९७७ मा अल इन्डिया रेडियोबाट पहिलोपटक स्वर परीक्षा पास गरेर लोकगायन सुरू गर्दा कुन्तीले पाँचवटा गीत गाएकी थिइन्। ती गीत फेरि उनको आवाजमा सार्वजनिक भएनन्। आफू १४ वर्ष हुँदा गाएका तिनै पाँच गीतमध्ये एक हो– बाह्र वर्ष टेक्दा टेक्दै। यो गीत अहिले रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गरेको उनी बताउँछिन्।
‘दार्जिलिङस्थित हाम्रो गाउँका माइला काकाले मादलको तालमा गाउनुभएको यो गीत संकलन गरेर मैले स्वर दिएको हुँ,’ कुन्तीले उक्त गीतको भिडिओमा भनेकी छन्।
(श्रोत : सेतोपाटी)
यसरी डान्स सिक्दै छन अशोक र ए आर ! ( भिडियो सहित )
फिल्म २.० को कस्तो छ बक्स अफिसमा सुरुवात ?
सलमानको ‘दबंग–३’ सँगै डिसेम्बरमा अन्य दुई ठूला फिल्मको भिडन्त